Global Voices teny Malagasy · admin – Mey 2010
admin · Mey, 2010
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Mey, 2010
Amerika Latina21 Mey 2010
Niteraka resabe ny fanadihadihana natao vao haingana mikasika ny heloka nataon'nyMompera Marcial Maciel, mpanorina ny fikambanana Legion du Christ, izay niharan'ny fanamelohana marobe momba ny fametavetana ankizy tsy ampy taona nanomboka tamin'ny taona 1990 hatramin'ny taona 2008 nahafatesany. Ankoatry ny vonoan'olona, dia fantatra fa teo ambany fiarovan'ny mpitondra fivavahana ambony manakaiky...
Pakistan: Fihetseham-po tamin'ny saika nanapoahana ny Time Square
Pakistana21 Mey 2010
Tamin'ny voalohan'ny volana dia niteraka fanairana amin'ny loza tao New York ny fikasana hanapoaka baomba ny Time Square. Voasambotry ny polisy tao amin'ny seranam-piaramanidina i Faisal Shahzad, terantany pakistano-amerikana nahiahiana ho tompon'antoka tamin'io fikasana hanapoaka io. Araka ny tatitra dia hita teo afovoan'ny Time Square ny fiarakodian'i Faisal feno lasantsy,...
Amerika Latina17 Mey 2010
Arabia Saodita17 Mey 2010
Iràna15 Mey 2010
Fanambarana ireo mpandresy tamin'ny “Breaking Borders”
15 Mey 2010
Mba ho fankasitrahana ireo nampandroso ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny internet, ny Google sy Global Voices dia namoaka ny anaran'ireo voalohany tamin'ny fifaninana Breaking Borders (Azerao ny sisintany). Ny fankasitrahana, notohanan'i Thomson Reuters, dia omena ho fankasitrahana ireo web nahafinaritra indrindra nataon'ny olontsotra na fikambanana niasa tamin-joto, nahery ary nahay niara-niasa hanadratana...